Dilalka siyaasadeed oo kusoo kordhaya Koonfur Afrika - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, ENCA/SAPA
Sindiso Magaqa wuxuu ahaa xubin sare oo ka tirsan ANC
Dilka xubin sare oo ka tirsan xisbiga ANC oo lagu dilay gobolka KwaZulu-Natal ayaa soo nooleeyay xusuustii mugdiga ahayd ee uu gobolkan soo maray.
Sindiso Magaqa oo mar soo noqday xoghayaha guud ee garabka dhalinyarada ANC ee saamaynta badan ayaa noqotay qofkii 35aad ee loo dilo siyaasad darteed laga soo bilaabo sanadkii hore. Gaari uu watay ayaa rasaas lagu furay bishii july.
Xigashada Sawirka, EFF
Rasaas ayaa ka muuqata gaariga Sindiso
Waxaa laga cabsi qabaa in dilalka ka dhacaya gobolka uu burburin karo dhaqanka dimoqoraadiyadda ee bulshadan lagu yaqiinay, wuxuuna halis ugu jiraa in uu ku faafo dalka intiisa kale.
Gobolkan waxa uu leeyahay taariikh mugdi ah, iyada oo kumanaan qof lagu dilay intii u dhaxaysay 1980 illaa 1990-kii, balse heerka ay hadda wax marayaan inkasta oo aanan lala barbardhigi karin xiligaas, haddane ma ahan wax la iska indho tiri karo.
Ninka Sindiso waxa uu qabsaday bogaga hore ee wargaysyada, warbaahinta oo dhanna waa ay tabisay, balse waxaa jira dilal kale oo dhacay oo aanan lasoo hadal qaadin.
Aaska xubin kale oo ANC ka tirsan oo la dilay
Wasiirka booliska Koonfur Afrika Fakila Mbalula ayaa qiray dilka wax ka badan 30 qof oo siyaasad awgeed loo dilay
Dilalka dhacay intooda badan ma ahan kuwa ku saabsan xisbiyo siyaasada ee iska soo horjeeda, ee waa dilal ka dhex dhacaya garabyo xisbiga ANC.
Dadka inta badan la dilay waxa ay hayeen xilal dowladda hoose, halkaas oo dhaqaale badan uu yaalo, waxayna u badantahay in maamulka dhaqaalahaasi uu sabab u yahay waxyaabaha kalifaya dilka.
Xisbiga mucaaradka ah ee DA ayaa sheegay in dilka Sindiso uu ka dambeeyay kadib markii uu su'aalo ka keenay musuqmaasuq la sheegay in uu ka socdo maamulka dowladda hoose ee gobolka KwaZulu-Natal oo ay ANC maamusho.
Dowladda dhexe ayaa guddi baaris ah u saartay dilalka dhacay, waxaana hormuud ka ah garyaqaanka lagu magacaabo Marumo Moerane.
Todobaadkii hore xisbiga ANC ayaa isaguna sheegay in uu guddi u saaray dilalka loo gaystay dadka xisbiga ka tirsan, taasina waxa ay u muuqan kartaa qirasho aan ku talogal ahayn oo ku saabsan in dilalka ay yihiin kuwa xisbiga ka dhex dhacaya oo siyaasad la xiriira.
Daboyaaqadii sanadihii 1980-maadkii, iyo horaantii 1990-naadkii waxaa la rumaysanyahay in gobolkaas lagu dilay illaa 20,000 qof rabshado u dhaxeeyay xisbiga Inkatha Freedom Party iyo ANC, waxayna rabshadaha dhacayeen xili lagu jiray gorgortankii ku saabsanaa xornimada dalkaasi oo markaas uu caddaanka maamulayay.
Markii dambe waxaa soo shaacbaxday in xoogag ka tirsanaa midabtakoorka ay iyaguna qayb ka ahaayeen dilalkii dhacay xiliyadaas, iyaga oo doonayay in ay suuro xumeeyaan isbadalka dimoqoraadiyadda la doonayay.
Cyril Ramaphosa madaxweyne ku xigeenka Koonfur Afrika
Dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dhacay waxa ay walwal badan ku hayaan madaxweyne ku xigeenka Cyril Ramaphosa oo rajaynaya in uu badalo madaxweyne Jacob Zuma.
Isaga oo la hadlay xubno ka tirsan xisbiga ayuu yiri "Dilalkan ka dhexdhacaya xisbiga waxaa qasab ah in ay joogsadaan".
Todobaadkii hore waxaa soo shaaxbaxay muuqaal muujinaya labo nin oo ku hubeysan qoryahay AK47, kuwaas oo ku hadaaqayay hadalo ay ka mid yihiin "maanta waxaa dhimanaya eey", iyaga oo ku hadlayay afka Zuluga oo looga hadlo gobolkan.
Xildhibaan ka tirsan xisbiga ANC oo lagu magacaabo Makhozi Khoza ayaa sheegtay in ay nafteeda u baqayso. Waxay intaas ku dartay in aysan ka baqanaynin xisbiyada ay siyaasada ku kala aragti duwanyihiin, balse cabsida ay kaga imaanayso xisbigeeda dhexdiisa.
Rag ku hubeysan AK47
Inkasta oo dilalka aanan lala xiriirin karin loolanka madaxtinimo ee xisbiga ee hadda taagan, haddane waxa ay muujinaysaa halista ay wajahayso ANC oo 105 jirsatay.
Koonfur Afrika oo sharci ka soo saartay musharka shaqaalaha
Geerida Amiir Philip oo 'raad weyn' ku reebtay nolosha Boqoradda
Geerida Amiir Philip oo la filayo inay shaafiso xiisaddii ka dhex taagnayd xubnaha boqortooyada
Boqorka Urdun iyo walaalkii oo meel ka soo wada muuqday